Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguKristina
Isiqithi sihambe. I-18 m2 indlu yeendwendwe epholileyo embindini weziqithi. Ifumaneka ngaphandle kwelali endala yokuloba, imiswe ematyeni ngokwawo phakathi kolwandle olugqumayo kunye nomjelo opheleleyo. Ikufuphi nolwandle kwaye phakathi ufumana imbonakalo yomhlaba eqhelekileyo yommandla, ikrwada, intle kunye ne-surreal. Le yeyabantu abangathanda ukonwabela indalo, ukukhwela intaba, ukukhwela inqanawa, ukufota, okanye ukugcakamela ilanga. Senze ividiyo ekhethekileyo phezu kwendawo kwi-youtube, chwetheza "Grundsund Kvarneberg".
Ummandla unamaxesha ama-4: Ihlobo: Ukufudumala, ububele kunye nokukhanya kunye neyona nto idumileyo. Ungayonwabela yonke into enento yokwenza namanzi, ukuqubha, ukuhamba ngesikhephe kunye nokutya oonokrwece. Ukwindla: Ukukhwela inqanawa kunye nokuloba, imibala yasekwindla kunye nokungafane kufumaneke kuzolile. Ebusika: Kumanzi, kuluhlaza, kuyabanda kwaye kumnyama kodwa kwangaxeshanye kupholile kakhulu. Ixesha leKrisimesi ngakumbi. Eli lixesha lokuba umke kwaye wenze umsebenzi othile.
Entwasahlobo: Ukukhanya okubuyayo kuyangena, ubomi buyabuya. Usabanda kodwa umhle njengesiqhelo. Ixesha le-Ista libonelela ngezithethe zasekuhlaleni ezifana "nemililo yasempumalanga".
Yiya kwiVimeo kwaye uchwetheze: "Påsk i Grundsund" kwividiyo
Le ndawo ikwabonelela ngokunyuka komgangatho wamatye ehlabathi. Ibhafu eshushu iyafumaneka ukuze irente unyaka wonke malunga neyona nto imnandi kakhulu ebusika.
Ilali inonxibelelwano lwezithuthi zikawonke wonke unyaka wonke, ivenkile yegrosari yasekhaya kunye neendawo zokutyela ezimbalwa ehlotyeni. Abemi malunga nama-2000 ehlotyeni. Eyona dolophu inkulu yimizuzu engama-45 ngemoto, iLysekil pop 7600 apho ufumana iindawo zokutyela ezininzi unyaka wonke. I-Ferry (akukho zimoto) uxhumano kwi-Lysekil ukusuka kwindawo esenyakatho yesiqithi, ithatha malunga ne-15 min. Esona sikhululo sikufutshane kukuhamba ngeyure ezi-2, Landvetter Gothenburg. Iiyure zokuvula ivenkile yegrosari phakathi evekini 9-19, ngoMgqibelo 9-16, ngeeCawe 10-16. Ivenkile ekufutshane evulwe kade ibekwe eUddevalla okanye eLysekil.
Isauna evulwe ngamaplanga enombono wolwandle ofumanekayo ukuze uqeshwe kwi-marina yendawo. Kufuneka ibhukishwe kwangethuba.
NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu 16-22
100:- ngomntu ngamnye ubuncinane ngama-400:-
NgoLwesine 16-22 wonke umntu wamkelekile
50 :- umntu ngamnye
NgeMigqibelo nangeeCawe 11-16, 16-22
Yenza ubhukisho kwi www.grundsundsmarina.se
Ubumfihlo buyahlonitshwa kodwa ndikulungele ukuphendula yonke imibuzo onayo.